Isikhokelo sabasanda kuKhuphiswano loMdaniso weBallroom | UFred Astaire
Izitudiyo zomdaniso zikaFred Astaire - UMFUNDI OMTSHA OWODWA
Iintsika ezi-4 zomdaniso
I-FAQs zesifundo soMdaniso
Izifundo zaBantwana 'nolutsha'
IBhunga loMdaniso le-Int'l
Isigidi seMask Movement ™
Iintshatsheli zamanye amazwe
Yiba ne Studio
Ibhlog kunye nezeNtlalo
Iqonga lezifundo ezikwi-Intanethi
Ulwazi lwezifundo ezikwi-Intanethi
Izifundo zabucala zokuSasaza
Inkqubo yeTrophy ekwi-Intanethi
Isikhokelo sabasanda kuKhuphiswano loMdaniso weBhola
Ixesha le-KNIGHT nguStephen Knight, uSekela Mongameli we-FADS kunye noMlawuli woMdaniso weSigqeba
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava okufundisa, ndiyazi ukuba kungoyikisa umfundi omtsha wokudanisa ukwenza isigqibo sokungena kukhuphiswano lweFred Astaire Dance Studios Dance. Nokuba ngumnyhadala wengingqi, ophakathi kwengingqi okanye umdaniso wesizwe, kukho ukungqinelana kwindlela uKhuphiswano lwethu loMdaniso oluhlelwe kwaye luqhutywa ngayo, kodwa phantse yonke loo nto inokubonakala ingaqhelekanga. Ke nasi isikhokelo sam sokukunceda uzive uzithembile, kwaye ukulungele ukuqala uhambo lwakho lomdaniso wokhuphiswano:
Into yokuqala endifuna uyenze kukungahoyi igama elithi 'ukhuphiswano'. Endaweni yoko, yicinge njengomsitho apho abafundi bayo yonke iminyaka kunye namanqanaba obuchwephesha bezakubonisa ukuthanda kwabo ukudanisa.
Gxila ekwenzeni owona msebenzi ungcono onokuwenza, kwaye musa ukuchitha ixesha okanye amandla ukuzithelekisa naye nabani na. Ungoyena mgwebi wakho ubalaseleyo, kunye nokhuphiswano lwakho kuphela!
KwiFred Astaire Dance Studios, sikhuthaza abafundi bethu ukuba bathathe inxaxheba kuKhuphiswano loMdaniso, kuba ayonwabisi, iyonwabisa kwaye ayilibaleki- baya kukunceda ufezekise iinjongo zakho zomdaniso. Umsebenzi wethu kukukunceda ufumane izibonelelo ozifunayo. Ubuhle boKhuphiswano lomdaniso weFred Astaire Dance Studios kukuba uya kuba namava amahle ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Iziganeko zethu ziza zigqibelele ngobuhle, ukonwaba, ukudanisa, ubuhlobo obutsha kunye neenkumbulo ezimnandi zokuphila ubomi bonke. Umqeqeshi wakho wokudanisa uya kukukhokela kuwo onke amanyathelo endlela, kubandakanya:
Unxibe ntoni - kumgangatho wokudanisa, kwaye ucime
Uza kuqhutywa njani umcimbi
IiVidiyo kunye nokuFota
Izinwele kunye nobuso
Ukubeka ulindelo lwakho njengomntu omtsha
Emva kokuba uthathe isigqibo sokuzimasa- kunye neenyanga ngaphambi kokuba kwenzeke ukhuphiswano- wena kunye nomhlohli wakho wokudanisa uya kuqala ukwenza amalungiselelo okuhamba kunye nezicwangciso zokuzimasa, kwaye uthathe isigqibo malunga nendlela yakho yomdaniso yeejaji. Zive ukhululekile ukubuza imibuzo emininzi onayo- yinxalenye yomsebenzi wethu ukwenza ukuba ukhuphisane unolwazi. Njengomdanisi wokuqala, khumbula ukuba uya kukhuphisana kuphela nabanye abantu abafikayo abanenani elifanayo loqeqesho lokudanisa njengawe. Eli ke lixesha lokubonisa yonke le ndlela ubuyifunda, kwaye wonwabe! Ezi ziganeko ziya kuthatha umdaniso wakho wentlalontle uye kwinqanaba elitsha lesakhono, ukuvumela ukuba ube nokuzonwabisa, ukuzithemba kunye nobunini. Uya kuqhubela phambili nangakumbi kumanqaku abaGwebi, nasekuqwalaseleni abanye abadanisi bePro / Am kwibhola yegumbi. Kwaye, uyakwenza abahlobo abatsha kwaye ube yinxalenye yeqela lakho elikhuphisanayo ne studio sakho! Ndincoma wonke umntu ukuba afumane ubuncinci kwiminyhadala yethu yomdaniso kwaye nokuba nenkalipho yokuphuma aye kudanisa. Ndiyakuthembisa, uyakuba neqhayiya ngawe.
Into yokugqibela endifuna ukuyithetha, khumbula ukuba le yinto yakho oyithandayo hayi umsebenzi wakho. Siphe ithuba lokuba sikubonise ilizwe elinamathuba amaninzi anokuzisa uvuyo olutsha ebomini bakho. Ndijonge phambili ekuboneni uncumo lwakho oluhle ngaphandle kumgangatho wokudanisa kwaye ujonge njengoko uqala uhambo lwakho.
UStephen Knight nguSekela Mongameli kunye noMlawuli woMdaniso oLawulayo kunye noFred Astaire Dance Studios. Ukwasebenza njengoMqeqeshi woMdaniso kunye noMlawuli weFranchise yeNgingqi kwiFADS Wisconsin Region. INtshatsheli yeSizwe ngexesha lakhe lokhuphiswano, uStephen waziwa kakhulu ngobugcisa bakhe, kunye nokwenza indawo enkulu yeFred Astaire Dance Studios Silver Syllabus. Ngolwazi oluthe kratya kumalungu eFred Astaire Dance Studios International Council Council, nxibelelana nathi. Kwaye ukuze uqalise kuhambo lwakho lomdaniso, nxibelelana noFred Astaire Dance Studios namhlanje.
Fumana i-Offro Offer
IP: 413-567-3200 | F: 413-565-2298
Ilungelo lokushicilela © 2021 iMigaqo yeNkonzo ye-Fred Astaire Dance Studios
Sincede sifumane izitudiyo ezikufutshane nawe! Iindawo zethu ezikufutshane ziya kubonisa kwiphepha leziphumo zophando.
* ibonisa indawo efunekayo